Ụbọchị My Pet » Top 10 Photo mejọrọ
Ihe na-esonụ ọ dịghị-efu ndepụta weere si ajụjụ ọnụ na ogologo oge online daters na azụmahịa uloru na nkwado mkpara nke ọtụtụ isi online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ. Gịnị bụ ala akara? The otu akụkụ kasị mkpa nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ otú ị aka ndị dị mfe omume nke na-anọchite anya onwe gị na photos.
1. Ọ bụghị ikenye a foto niile. Ọ bụghị ikenye a foto na niile bụ achọghị ịzụ kasị akwa ndudue. Ị ga-enwe ihe zoo ma ọ bụrụ na foto gị bụ a oghere ohere. Ịtụkwasị Obi anyị, onye ọ bụla na-eche na otú. Na na jaundiced okwu “ịjụ m foto” na-etiri mara mma ngwọrọ ụbọchị ndị a. Na-akọwa onwe gị okwu bụ ngwọrọ, kwa.
2. Ikenye a foto ihe karịrị 2 ma ọ bụ 3 afọ. Ọ bụrụ na ị bụ kwa tọrọ gị foto gị na akanamde mmehie nke “afọ shaving” online. Nke a na-ekwe nkwa na-etinye mmekọrịta gị na shaky n'ala site na mmalite na-abụkarị ntabi “obibi-emebi.” Mgbe-eche ihe mere na abụọ ụbọchị mgbe itịbe? Ọ bụ a n'aka nzọ ha ga-agwa gị ma ọ bụrụ na ị na- “afọ idet”.
3. Ọ bụ na obere ọnụ ọgụgụ na ndabere gị? Ọ bụrụ na gị ihe oyiyi bụ otú obere i nwere ike ghara hụrụ n'ụzọ doro anya na ị ga-butt-jọrọ njọ ma ọ bụ nwere ihe zoo. Agụba. Get a n'ezie foto nke onwe gị. Anyị na-ama hụrụ Yosemite – na onye.
4. Ime site na iji a foto na a iju ma ọ bụ goofy okwu. Ọ bụrụ na naanị pụtara na-emechi elu, ọ dị ka’ doo anya na i nwere onwe gị anya dị ka ị dị nnọọ smelled ihe unmentionable, ọ bụ oge maka a mma foto. Ọbụna prose site Shakespeare na profaịlụ gị ike merie jogburu onwe mbụ echiche kere a drunken, ma ọ bụ njọ, na-atụ ya egwu “Mgbada na nnukwu ọkụ ihu” anya.
5. Ọ bụ gị – ma ọ bụ onye na-ekpe gị – ma ọ bụ onye na-akụ n'okirikiri na ị? Gịnị mere unu na isusu ọnụ na iju-na-achọ nwoke na ntì? Ònye ka ọ bụ onye na-aka ya na gị na ịnyịnya ibu? Ndị nne na nna gị? Ọ bụrụ na anyị na-eche na ọ bụ ọ bụrụ na ị na-akọwa ya na profaịlụ gị ederede, ọ bụ akaha. Gbalịa izere ikenye a foto na ihe ndị mmadụ karịa gị na ya, karịsịa ma ọ bụrụ na onye ọzọ(s) ndị na-abụghị nwoke ibe, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eche na foto nke ị na-ezi ihe.
6. Takeoff ndị ugogbe anya maka anwụ. Aga incognito bụ na anyị? Fim Joe Hollywood?Yi ugogbe anya maka anwụ dị nnọọ na-atụ aro i nwere ihe na-ezo.
7. Youat ndị ọzọ, isi ebugharị azụ na-achị ọchị, biya na aka, havingso ukwuu fun ị na-eme anyị puke. Ọ bụghị na anyị kwere na ị getdrunk na otu 5 ehihie na abalị a izu, ma gịnị mere anyị kwesịrị iji ohere.
8. Ịtụkwasị gị na nne gị ma ọ bụ nwanne na-agwa gị nke foto ị shoulduse online. Gị na nne gị na-eche na ọbụna gị goofiest foto looksabsolutely maa mma. Echiche gị bụ biased, kwa. Nke ahụ mmasị photothat ị na-eche anya n'ezie, n'ezie ezi nwere ike ọ gaghị. Kama, ịjụ someoneof abụghị nwoke ndị ị na-ahụ mara mma nke foto ị shoulduse online. Nke ahụ bụ otu onye kasị ezi ụfọdụ gị photo'seffectiveness. Gịnị mere? N'ihi na mgbe ị biputere foto gị na online, you'llbe too anyị dị otú ahụ ndị mmadụ – ma ọ bụ too anyị ha – a thousandtimes a ụbọchị.
9. Showingtoo ukwuu akpụkpọ. Nke a ga-nnọọ na ị na-ezighị ezi na-eme ma ọ bụrụ na you'rea nwaanyị, na-emekarị ọ Ibọrọ mgbe niile ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke. E areexceptions, ma ọ bụghị ọtụtụ.
10. Iji gị crappy snapshots n'ihi na unu chere na iji professionalphotos bụ “n'ịghọ aghụghọ ule”. Iji ọkachamara àgwà photosis ihe mbụ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọkachamara na-atụ aro ị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-takeyour online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kpọrọ. Ị na-adịghị atụkwasị obi ike gị,gị ọhụụ ma ọ bụ ọbụna gị ịkpụ ntutu na-amu amu. Ya mere, gịnị atụkwasị obi gị online mbiet otu? Ime a na-adịgide adịgide mbụ echiche na professionalphotos bụ a ezi uche n'ụzọ na-etinye gị mma ihu na-atụ.